खगेन्द्रको ‘डमरुको डण्डीबियो’ को जापानी मुल्य ७ लाख ! – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentखगेन्द्रको ‘डमरुको डण्डीबियो’ को जापानी मुल्य ७ लाख !
खगेन्द्रको ‘डमरुको डण्डीबियो’ को जापानी मुल्य ७ लाख !
May 17, 2018 sutraentertainment Entertainment, Event, Kollywood, News 0
खगेन्द्र लामिछाने अभिनित ‘ डमरुको डण्डीबियो’ जापानका लागि रु ७ लाखमा बिक्री भएको छ । गत वैशाख २१ गतेदेखि प्रदर्शनमा आएको यो फिल्म यतिबेला तेस्रो हप्तामा प्रदर्शन भैरहेको छ । सेभेन समुराई इन्टरनेशनलका प्रतिनिधि राजु लामा र समृद्धी इन्टरटेनमेन्टका प्रतिनिधि अर्थात सिनेमाका निर्माता बिनोद गुरुङ्गबिच बुधबार पुरा जापान राईटको सम्झौता भएको हो । सेभेन समुराईका एमडी रेशमकुमार डंगोल हुन् ।
छेतेन गुरुङ्ग निर्देशित ‘डमरुको डण्डीबियो’मा नेपालको पुरानो तथा लोपोन्मुख डण्डीबियो खेलको पुनर्जागरण गर्न लागि परेको एक युवकको कथा प्रस्तुत गरेको छ । अभिनेता खगेन्द्र लामिछानेकै लेखन रहेको फिल्ममा स्वयम खगेन्द्र मेनुका प्रधान, बुद्दी तामाङ, अनुप बराल, अंकित खड्का, आशान्त शर्मा, लक्ष्मी बर्देवा, मिश्री थापा, इंगि होपू कोइंच सुनवार, नमिता घिसिङ लगायतका कलाकारको प्रमुख भूमिका रहेको छ ।
नोर्बु छिरिङ घले र विनोद गुरुङको संयुक्त लगानी रहेको यो फिल्म समृद्दी इन्टरटेनमेन्टको व्यनरमा निर्माण भएको हो । फिल्ममा हरि हुमागाईंको छायाँकन, निमेष श्रेष्ठ र प्रितम पाण्डेको सम्पादन रहेको छ ।
‘दि कर्मा’मा नीता, परमिता र बुद्दीको इन्ट्री, रिलिज मिति भदौ तय